प्रचण्डको योजनामा कांग्रेसमा ठूलो विद्रोहको तयारी, को को जाँदैछन् माओवादीको सती?Nepalpana - Nepal's Digital Online
२०७८, माघ १३ गते
# रेणु यादव
# सिके राउत
# सुरेन्द्र प्रसाद सिंह
# नेपाली काँग्रेस, सर्लाही
# जिल्ला अधिवेशन
# ज्योतिष सुरेश चन्द्र रिजाल
प्रचण्डको योजनामा कांग्रेसमा ठूलो विद्रोहको तयारी, को को जाँदैछन् माओवादीको सती?
नेपाल पाना चैत्र १५ २०७७
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहले सभापति शेरबहादुर देउवालाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने योजना बनाएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रको आवश्यकताअनुसार देउवा हटाउने तयारी भएको हो ।
माओवादी निकट उच्च स्रोतका अनुसार वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह र गगन थापाले देउवालाई हटाउने योजना बनाएका हुन् । यो समूहले प्रकाशमान सिंहलाई दलको नयाँ नेता चुन्ने तयारी छ ।
कांग्रेसले आगामी बुधवार संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । जुन हिउँदे अधिवेशनको अन्तिम बैठक हुने बताइएको छ । कसैलाई साथ नदिएर कांग्रेसमा परिपक्व निर्णय लिइरहेका देउवाविरुद्ध विद्रोहका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समन्वय गरिरहेको पनि बुझिएको छ ।
प्रचण्डले रामचन्द्र पौडेललाई हातमा लिएका छन् । आफूलाई साथ नदिने देउवा हटाउनका लागि प्रचण्डले पौडेललाई भारी फण्डसहित सबै सहयोग गर्ने बचन समेत दिएको उच्च स्रोतले दाबी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताबाट हटाएर नयाँ समीकरण बनाउने प्रयासमा रहेका अध्यक्ष प्रचण्ड सफल भइरहेका छैनन् ।
एमालेभित्र माधव नेपाललाई आफ्नो मुठ्ठीमा पार्न सफल प्रचण्डले कांग्रेसभित्रका पौडेल समूहलाई उचालेर विद्रोहको वातावरण बनाएका छन् । जसपामा उपेन्द्र यादव समूह उनको पक्षमा छ । जसपाभित्र विग्रह ल्याउन सफल भइसकेका प्रचण्ड कांग्रेसभित्र पनि विद्रोह गराएर आफू सत्तामा जाने मार्ग प्रशस्त गर्ने प्रयत्नमा छन् ।
कांग्रेस सभापति देउवाले आफूहरुलाई प्रतिपक्षीमा बस्ने म्याण्डेट भएको र अविश्वास प्रस्ताव पनि नल्याउने र सरकारमा पनि सहभागी नहुने बताइसकेका छन् ।
यता जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पनि अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा जाँदिन भनेर देउवाले भनेको बताइसकेका छन् । कांग्रेसभित्र पौडेल समूह देउवालाई सरकारमा जान भनेर उचाल्ने र उनको छवि ड्यामेज गरेर आगामी महाधिवेशनमा नेतृत्व हत्याउने दाउमा छ । यो बुझेका देउवा सतर्क छन् ।
यस्तोमा देउवाका अगाडि कुनै जोर नचलेपछि पौडेल समूह माओवादीको सती जान तयार भएको उच्च स्रोतले बतायो । पौडेल समूहमा असन्तुष्ट एक नेताले देउवालाई हटाउनेबारे छलफल भइरहेको तर यसले पार्टीलाई नै क्षति पुग्ने बताए । आफूहरुले यो कदम नचाल्न सुझाव दिएको उनले बताए । शनिवार प्रचण्डसँगै बसेर पौडेल निकट नेता मिनेन्द्र रिजालले सभापतिलाई सरकारको विरुद्धमा उभ्याउन प्रयास गरे पनि नसकेको बताएका थिए ।
रिजालले भनेका थिए, ‘म मेरो पार्टीको गर्धनसम्म मात्र हो। टाउको गर्धन अनुसार चलोस् भन्ने प्रयास भइरहेको छ। राजनीतिक निर्णय गर्न हामी तयार छौं। प्रमसँग ओली पदमा पुगेदेखि नै हाम्रो विश्वास छैन।’ उनको भनाइबाट पौडेल समूह सुरु देखिनै असन्तुष्ट छ । तनहुँमा थुनेकाले पनि पौडेल ओलीप्रति अझ रुष्ट छन् । जसका कारण उनी ओलीविरुद्ध प्रचण्डसँग हात मिलाउन तयार भएका छन् ।
जसअनुसार पहिला सभापति देउवालाई नै ओलीविरुद्ध उचाल्ने प्रयास गरे। नसकेपछि देउवालाई हटाएर अनि ओली हटाउन अघि बढ्ने रणनीतिमा पौडेल समूह अघि बढेको बुझिएको छ ।
प्रचण्डद्वारा भारतीय विदेश सचिवसँग भेट्न अस्वीकार, देखाए राष्ट्रवादी छवि !
ओलीविरुद्ध काठमाडौंमा प्रचण्ड र नेपालनिकट विद्यार्थीको यस्तो एक्सन, ठूला नेता गएपछि बालुवाटारमा खलाबैला !
'राष्ट्रनायक प्रचण्ड' को समर्थनमा सामाजिक संजालमा युवाहरुको व्यापक सक्रियता, साँझ भब्य कार्यक्रम !
अन्ततः नेकपामा हारे ओली : पेलेरै अघि बढे प्रचण्ड र माधव नेपाल, गुम्न सक्छ ओलीको प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष पद !
चैत्र १५, २०७७ आइतवार ०७:११:२२ बजे : प्रकाशित
कानुन मन्त्री एवं कांग्रेस नेता दिलेन्द्र बडूलाई कोरोना संक्रमण
खोपमा प्रधानमन्त्री देउवाको मिसन सफल, ८० प्रतिशतले लगाए पहिलो डोज
कांग्रेसका यस्ता सांसद, जसले आफ्नो सबै तलबभत्ता गरिबको उपचारदेखि विद्यार्थीको छात्रवृत्तिमा दिन्छन्
टेको निकाल्दा ६ करोडको पुल भाँचियो
कांग्रेसलाई माओवादी-नेकपा एसबाट धोका, एमाले र राप्रपालाई भोट
अमेरिकामा थुनामा रहेका पाकिस्तानी स्नायु वैज्ञानिकलाई टेक्सास बन्धक बनाउने घटनाप्रति ध्यानाकर्षण
७३औँ गणतन्त्र दिवसमा नेपालबारे भारतको ठूलो घोषणा, राजदूतले सुनाए प्राथमिकता
सरकारले संविधानअनुसार नै सबै निर्वाचन गर्ने, उत्ताउलो नबन्न एमालेलाई सञ्चारमन्त्रीको चेतावनी
यस्ता छन् देउवा सरकारका पछिल्ला ८ निर्णय : जापानदेखि प्रहरी र सेनासम्म